XOG: Madaxda dowlad goboleedyada oo kulan gaar ah yeelanaya maalmaha soo socda – Xorriya Online
XOG: Madaxda dowlad goboleedyada oo kulan gaar ah yeelanaya maalmaha soo socda
Shirka oo la aaminsan yahay in ay qabab qaabiyeen Wakiilada Beesha Caalamka ayaa Madaxda Dowlad Goboleedyada lagu amray in ay isku tanaasulaan oo ay ka gudbaan qilaafka dhexdooda ka jira.
Wada hadal dheer kadib Xorriya Online waxa ay ogaatay in lagu ballamay in lagu kulmo goob dhex-dhexaad ah oo aan wali la carabaabin, waxa ayna u badan tahay in madasha xigta ee madaxdu ku shireyso ay noqoto magaalada Baydhabo ee magaalada madaxda gobolka Bay.
Madaxweynha Koofur Galbeed, Lafta Gareen, oo kulankii ugu dambeeyay ee Qoorqoor, Guudlaawe iyo isagu Muqdisho kula kulmen Midowga Musharixiinta, dusha saartay waan waanta lagu baadi goobayo xal u helidda muranka ka taagan doorashooyinka ayaa la filayaa inuu codsan doono in maamulkiisu marti galiyo shirka soo socda.
Doorkan uu qaatay Madaxweyne Lafta Gareen waxaa horay ugu fashilmay madaxweynaha Galmudug Axmed Qoor Qoor oo waqti badan kadib sheegay inuu ku fashilmay waan waanti uu waday, Midowga Musharixiintuna sheegeen in ay kalsoonidii ay ku qabeen dhexdhexaadnimadiisa ay kala laabteen.
Waxaa lasoo dhaafay xilligii loo qorsheeyay in doorashooyinku bilaawdaan, halka xil-heynta Madaxweyne Farmaajo ay ka dhiman tahay 15 maalin oo qura.